Maqal: Police-ka Kismayo oo Amar Soo saaray & Bananbax kismayo ka dhacay – SBC
Maqal: Police-ka Kismayo oo Amar Soo saaray & Bananbax kismayo ka dhacay
Ka dib cabasho ka dhalatay ciriiriga suuqa weyn ee magaalada kismaayo islamarkaana ka soo baxayay maalmihii ugu dambeeyay Dadweynaha ku dhaqan magaalada ayaa waxaa maanta arintaasi jawaab ugaga dhigay wareegto taliska ciidanka Maamulka Jubaland ee magaalada Kismaayo.
Wareegtadan ka soo baxday Police-ka Kismaayo ayaa loogu sheegay ganacstada goobaha sharci daro ka sameysatay suuqa weyn ee magaalada in ay baneeyaan furaanna wadooyinka ku xaniban goobahaasi sharci daro.
Waxa ay sidoo kale Shegeen taliska ciidamada Police-ka in shacabka magaalada ku dhaqani loogaga baahan yahay in ay la shaqeeyaan Police-ka fuliyaan amarada ka soobaxay lana soo xiriiraan wax kastoo amaan xumi ah oo ay dareemaan.
Dhinaca kale waxaa maanta isku soobax lagu taageerayo amar ka soobaxay Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe ka dhigay gudaha magaalada Kismaayo boqolaal dadweyne ah.
Dhageyso Warbixin faah faahsan oo uu Kismaayo ka soo diray Wariye Saciid Joogsade
Shacabka isu soobaxay maanta ayaa ka kala yimid xaafadaha magaalada waxyna isu soobaxooda ujeedadiisu aheyd sida ay u taageersan yihiin go’aankii Madaxweynaha Jubaland uu ka qaatay wafdiga Wasiirada iyo xildhibaanada ka kooban ee Dowlada Federaalka ka socda kuna kala sugan gudaha magaalada Kismaayo iyo Garoonka diyaaradaha magaalada, waxaanu amarkaasi ahaa in ay dib uga laabtaan magaalada.
Maanta ayay aheyd markii Afhayeenka Maamulka Jubaland Mr Seeraar uu saxaafada ka sheegay in Madaxweyne Axmed Madoobe ku amrayo xubnaha ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ee Kismaayo ku sugan in ay dib ugu ruqaansadaan halkii ay ka yimaaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan.
Siciid Cabdi Daahir Joogsade